Enrobing ngokuthi lokusebenza izinwele isakhi esithile esikhethekile - nopende ocwebezelayo. It wenziwa umcimbi ukuthi udinga ukwengeza akhanye futhi silkiness. Ngaphezu kwalokho, ngenxa le nqubo, izinwele iphakame kancane ngaleso izimpande - ngendlela izinwele frosting (eziningi Izibuyekezo ikhasimende siliqinisekise) ikuvumela ukunikeza ivolumu mane. Iphinde kwenza kube nokwenzeka misa nombala wezinwele: glaze kungaba kungekho nto enemibala emihle noma ezinemibala. Ungasebenzisa nokucwebezela okuzothile ukuthi lihlukile izinwele zabo siqu ngenxa umbala owodwa noma emibili. Noma alternation of amathoni ngesikhathi sale nqubo kwenza kube nokwenzeka ukuba athole isikhathi ngasinye ithoni ukuhluka.
Abantu abaningi bayazibuza ukuthi lihlukile elicwebezelayo izinwele yokuvikela ngocwazi. Lezi zinqubo kuningi esifana: glazing, kanye yokuvikela ngocwazi Kunconywa ngokuyinhloko ukuze kuvikeleke izinwele ezilimele emathonyeni zangaphandle, kanye ukuze bathuthukise ukubukeka kwabo. Ukuluphatha ngesihluku - ngokwesibonelo, ngobudedengu ukuxubha, njalo umbala upende ezonakalisayo, izinwele impango futhi ulahlekelwe isakhiwo sabo. ungqimba yabo lamellar iphazamisekile, kubenze babe ukungena nakwamanye amazwe futhi ulahlekelwe kukhanye yawo engokwemvelo. izinwele okunjalo bheka zomile, ezingaphili, avele amathiphu posechennye. Nge lezi zenzakalo futhi sikwazi ukubhekana ukwelashwa ngempumelelo yesimanje - izinwele yokuvikela ngocwazi futhi elicwebezelayo. Izibuyekezo kuphakamisa ukuthi lokhu izindlela ukuvikela izinwele okwenza babe namandla futhi ayazika, abanike akhanye futhi amandla.
Bobabili izinqubo siqale izinwele khulula ngothuli, sebum, izinsalela ukunakekela izindlela. Ukuze wenze lokhu, ikhanda ugeza ukuhlanzwa imoto ekhethekile (ungavele zisebenzisa kabili izindlela esivamile nokugeza izinwele). Ngemva kwalokho, lapho laminated kuya izinwele, umucu ngu Strand, ukusebenzisa buso ekhethekile ne amaprotheni ukuthi kudingeka ugcwalise isakhiwo izinwele ezilimele. Khona-ke, ikhanda ungakwazi bopha ithawula ngemva moistening ngaphansi amanzi ashisayo ukugijima: lapho zihlatshwa ukufudumeza amaprotheni izokwabiwa ngokusebenzisa izinwele. Kulokhu, imaskhi kwanele imizuzu emihlanu. Glaze ngoba yokuvikela ngocwazi phezu izinwele iphathwa ngalezi zithako uya seziyashelela.
Izinwele womile, wabe esechaza ukusebenza kwalo ocwebezelayo kubo. Kufanele ukushiywa imizuzu amabili - ke umboza unwele ngalunye. Ngemva kwakhe ukuwasha izinwele zakhe omisiwe utjuzhkom ngokusebenzisa iphepha isikhumba, pre-wasisonga nebhande lakhe. Tape ukushisa ku ngamunye izinwele enamathiselwe, "ababekwa uphawu." Le nqubo ngobuchwepheshe sifana yokuvikela ngocwazi lephepha, yingakho lethiwa. Ukuze uthuthukise umphumela izinwele emva iphele ukuthi isicelo a ukhilimu ekhethekile nge amafutha abalulekile, ukudala i ifilimu ezengeziwe ku unwele ngalunye.
Ngokuqondene elicwebezelayo, ke aluhileli ukushisa ngokuphatha izinwele. Glaze isakazwa phezu izinwele washiya kwalo emaminithi la-20. Ihlanganisa zonke izinwele ceramides ungqimba - amaprotheni yokufakelwa ukuthi ziklele izinwele, "ukuvala" izindawo ukungena nakwamanye amazwe, futhi awanike ukuminyana, olubushelelezi futhi kukhanye. Nokho, izinwele frosting, ukubuyekezwa zazo, esikhathini esiningi, omuhle, kunomphumela kunalokho zokuhlobisa - lena umehluko zako ezisemqoka kusukela yokuvikela ngocwazi. Kungaba ukuvimbela delamination eminye imikhawulo, ukuze bazivikele elangeni. Nokho, injongo eyinhloko elicwebezelayo - kokunikeza i ukubukeka ikhanda elikhangayo izinwele. Ngokungafani yokuvikela ngocwazi, wenze frosting izinwele ekhaya ngezandla zabo, kungenzeka (ukuba ulinge ekhaya yokuvikela ngocwazi kuyinto engathandeki ngoba ingozi okweqile izinwele utjuzhkom - ngenxa yalokho, bangase babe ngisho ziyaqothuka ngaphezulu).
Yokuvikela ngocwazi, kanye glazing Izinwele, ukubuyekezwa zazo zingatholakala kumasayithi amaningi kudingeke uphindaphindwe njalo emavikini amathathu kuya kwamane: okungukuthi kangakanani ngokuvamile kukholelwa phezu izinwele ifilimu zokuzivikela. Le nkathi singaba sincane - incike ukuvama ukugeza futhi izinga kwengoma. Nokho, noma kunjalo, izinzuzo zalezi izinqubo, kanye nomphumela zabo zangaphandle akunakuphikwa: abavumela ukuba kubuyiselwe futhi alondoloze akhanye, ivolumu kanye umsungulo izinwele.